ကျနော်သိခဲ့တဲ့ ကိုထွန်းအောင်ကျော် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Myanmar Muslims must do self-improvement in all the fields
Wikileaks revealed the Anti-Muslim activities of previous Military authorities »
(ဂ) စစ် တ ပ် မှအာဏာသိ မ်း ခံ ခဲ့ ရ ပြီးနောက် ၁၉၈၈ နှ စ်ကုန်ပို င်း ခန့်  တွင်ဗဟန်းအုတ်လ မ်းရှိပြည် ထဲေ ရးဝန်ြ ကီးဟောင်းဦးကျော်ြ ငိ မ်း အိ မ်ကားဂိုေ ဒါင် ထဲမှအစည်းအဝေးများတွ င်သူ့ကို ပြန်တွေ့ရသည်။ ကျနော်တို့ သည် တချိန်က နာမည်ကျော်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဟောင်း၏ ကားဂို ဒေါင်မျက်နှာကျက် ထု တ်တန်းသစ်သားတန်းများပေါ်ရှိ ၀ါကြန့်ကြန့် သတင်းစာဖို င်တွဲများ မှတ်တ မ်း မှတ်စုများကို မျက်နှာ ကျက်မိုးသဖွ ယ်ြ ပုလုပ်ထားသောအောက်ရှိ ကြမ်း ခင်း ပေါ်၌ ၀ိုင်း ဖွဲ့ စုထို င်ြ ပီးကျောင်းသားသမဂ္ဂ လှုပ်ရှားမှု များကိုအရှိန်အ ဟုန်မ ပျက် ဆက် လ က် ဆောင် ရွက်နို င်ေ ရး၊ ဗကသနှ င့် မကသ ပေါင်းစည်းရေး၊ ကျောင်းသားညီ ညွတ်ေ ရး နှ င့် အထက်ဗမာပြည် အောက်ဗမာပြည် ကျောင်းသာလှုပ်ရှားမှုများ ဟန်ချက်ညီညီ လှုပ်ရှားနို င်ရေး စသည့် ကျောင်းသားသမဂ္ဂလှုပ်ရှားမှုကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ တနေ့ အ စည်းအဝေးတွ င်သူ အ တန် င ယ်နောက် ကျမှ ရောက် လာပြီးကျနော့်နံေ ဘးတွ င်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ ကျနော့်ကိုသူ ပြုံးပြနှုတ်ဆက်ရင်း ကျနော့်ရှေ့ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်ချထားသော သခင်ဗဟိန်း၏ “ ဓနရှင်လောက” ဆို သော စာအု ပ်ကို ဖျက်ကနဲကောက်ယူပြီး ချက်ချင်းပင် မှောက်လျှက်အနေထေား ပြန်ချထားလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ဘာမှမဖြစ်သလို လက်ကိုမေးစေ့ထောက်ကာ ဆွေးနွေးပွဲကို အရှိန်မပျက် ဆက်နားထောင်နေသည်။ တချက်တချက် သူလည်းဝင်ဆွေးနွေးသည်။ အစည်းအဝေးပြီးတော့ ကျနော့်နောက်မှ သူလို က်လာပြီး ပခုံးကို လက်ဖြင့်ပု တ်ကာ “ ဒီလို အစည်းအေဝေးမျိုးတွေကို အဲဒီလို စာအု ပ်မျိုးတွေယူမလာစေချင်ဘူး ရဲဘော်ရာ” ဟု ကျနော့်အတွက် စိုးရိမ်သောလေသံဖြင့် သတိပေးလိုက်သည်။ ကျနော်ကလည်း ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါ လက်မှာကိုင်ထားသော သခင်ဗဟိန်း၏ စာအုပ်ထဲတွင် သခင်သန်းထွန်း၏ အင်းမတန် လှပသော အမှာစာပါသည်။ ထိုအမှာရေးဖွဲ့ပုံကို ကျနော်တော်တော်သဘောတွေ့နေမိ၍ ထပ်ကာထက်ကာ ဖတ်မိခြင်းဖြစ်ပြီး အခြားအကြောင်းမရှိပါ။ သို့သော် ထိုစဉ်က သူစိုးရိမ်သလို ဗကသ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ လှုပ်ရှားမှု ကို ဗကပ ယူ ဂျီ လုပ်င န်းနှ င့် ဆပ် စ ပ် လျက်ြ ဖိုခွ င်း ရန် ကြံစည်နေချိန်၊ သန့်ရှင်းဖြူစင်သော ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကို မစင်တပဲသား ခပ်ရန်ကြံစည်နေချိန် မဟုတ်ပါလား။ အတွေးအခေါ်အရ နလပိန်းတုံးများသည် လုပ်ကြံမှုအရာ၌ ပါရဂူမြောက်လှပေသည်။ အဲ ဒီေ နာက် သူနှ င့် ကျနော် ခင် မ င် သွားသည် ။ သူ့  ရုပ်ရ ည် က လူ တ ဖက် သားကိုခင်မ င်နှစ်လို ဖွယ်ေ ကာင်း အောင်စွ မ်း ဆောင်နို င်စွမ်း ရှိ သ ည်ဟုကျနော်ထ င်သ ည်။ တခါတရံလူ့ဘောင်သစ် ၀ါးရုံပင် စခန်းရုံးတွင် လည်းကောင်း တခါတရံ ဦးကျော်ငြိမ်း ကားဂိုဒေါင်ထဲမှာလည်းကောင်း သူနှင့် ဖြတ်ကနဲဖြတ်ကနဲ ဆုံဖြစ်ခဲ့ ကြပါသည်။ သူ့ ပုံ က ဖြူဖြူသန့် သ န့် ရုပ်ေ ချာချော ကျနော်တို့  ၈၈ မျိုးဆက်ခေတ်ြ ပို င်ကျောင်း သား
ခေါင်းဆောင် များထဲ တွင်သူ့  လိုရုပ်ေ ဖြာင့်ေ ဖြာင့်ေ ကျာင်းသားခေါင်းဆောင် ခပ် ရှားရှား ဟုပြော၍ရမည်လားမသိ။ သူ့ကိုကျနော်တွေ့တိုင်း နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးခေတ်က ကျနော်တို့ ကြည်ညိုလေးစားခဲ့ရသော ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကို ဗဟိန်းကို ကျနော့်စိတ်ထဲ သွားသွားသတိရနေမိသည်။ သူကလည်းမန္တလေးသားမဟုတ်လား။ ဒီ လို နဲ့ အမျိုးသားအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ြ ကီးဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆ န်းကတော် ဒေါ်ခင်ကြည်ဆုံးတော့ ကျနော်တို့တတွေ အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး လူထုဈာပန ကော်မတီ ဖွဲ့ခဲ့ကြသည်။ ထိုကော်မတီဖွဲ့ရန် အကြံပေးသူကား မှိုင်းရာပြည့်အရေးအခင်းကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမြမှိုင်းခေါ် ကြို မ၀င်းဖြစ် သ ည် ။ ၎င်းကော် မ တီ တွင်သူ သ ည် မင်းကိုနို င်၊ ကိုကိုြ ကီး၊ စသူ တို့  နှ င့် အ တူ အထက်ဗမာပြည် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် အဖြစ် ရှေ့တန်းမှာ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကတော် ဒေါ်ခင်ြ ကည့်ဈာပန တင်ဆောင် ထားသော ယာဉ် တ န်းရှေ့  တွ င်သူ သ ည် မ င်းကိုနို င်အ ပါအ၀င် အခြားကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် လက်ချင်းတွဲချိတ်ကာ အံကိုကြိတ်လျက် ကမ္ဘာမကြေဘူးသီချင်းကို သံပြိုင် သီဆို ရင်း ဈာပန လို က်ပါပို့ ဆောင်ခဲ့ကြပုံ ကို ခုအချိန်အထိ ကျနော့်မျက်စိထဲကမထွက်။ ထိုစဉ်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင် အားလုံးလိုလို မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင် ကျခဲ့ကြရသည်။ ကန်တော်မင် ပန်းခြံသို့ ဈာပနယာဉ်ရောက်သောအခါ စစ်ရုံးချုပ်ဘက်ကုန်းမြင့်ပေါ်မှ မောင်းပြန်သေနတ်များဖြင့် ချိန်ရွယ်ထားသော စစ်သားများရှေ့တွင် မင်းကိုနိုင်နှင့် မင်းဇေယျာတို့ အပြိုင်တရားဟောလျက် ဒေါ်ခင်ကြည့်ဈာပနကို အောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်ခဲ့ကြသည်။ ဈာပနပြီးနောက်နေ့တွင် ဖြစ်မည်ထင်သည်သူနှင့်ကျနော် ရန်ကင်းစာတိုက်မှတ်တိုင်နားက ဂန္ဓမာလ္ဘက်ရည်ဆို င်လေးမှာ တွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ဗကသ ဒုဥကဋ္ဌ ကို ကို ကြီး(ကေကျု့) နှင့် ကိုမြ၀င်းတို့လည်းပါသည်။ ထို့နောက်ကျနော်တို့ကို သူမန္တလေးပြန်တော့မည်ဟုပြောပြီး နှုတ်ဆက်ရင်း လူ စုခွဲြ ကသည် ။ သူ့  ကို ကားမှ တ်တို င်အ ထိ ကျနော် လို က်ပို့  ခဲ့သ ည် ။ ကားလမ်းဖြတ် အ ကူးသူ က ဘေးဘီ ကိုြ ကည့်ကာလေသံြ ဖင့်“ကျနော်တောထဲ ကို သွားတော့ မ ယ် ” ဟုပြောခဲ့သ ည် ။ ဘယ်ဘက်လည်းဟုကျနော်မေးတော့ “မြောက်ပိုင်းကချင်ဘက်လေ၊ မန္တလေးက ကျနော်တို့လူတွေ ရောက်နှ င့်နေပြီ ” ဟုသူေ ပြာခဲ့သ ည် ။ မကြာခင် ၃၆ ဘတ် စ ကားဆိုက်လာ၍ ကားပေါ်သို့ သူတိုးဝှေ့တက်သွားသည်။ သူလိုက်ပါသွားသော ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လက်ကျန် ဘတ် စ ကားအြို ကီးကိုေ ငးကြည့်ရ င်းကျနော် ကျန် ရ စ် ခဲ့ ပါသည် ။ ဤကား သူနှ င့် နောက် ဆုံးတွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် သူနှင့်မတွေ့ဖြစ်တော့ပါ၊ သူ့အသံဘာမှ မကြားရတော့ …။
ကိုဗ ဟိ န်း နှ င့် တော် တာ် တူသ ည် ဟုခံ စားမိ သ ည် ။ ကိုဗ ဟိ န်း ကလည်းမန္တလေးသား၊ သူ က လည်းမန္တလေးသား။ ကိုဗ ဟိ န်း က ထောင့်သုံးရာပြည့်အ ရေးတော် ပုံြ ကီးတွ င်ဗကသ ခေါင်းဆောင် အ နေဖြင့်“မြင်းခွာတချက်ပေါက် လျှ င် မီးဟုန်း ဟုန်း တောက်စေရမည် ” ဟုရဲရဲတောက်မိန့်ခွန်းခြွေခဲ့သည် …။ သူကလည်း ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ ကြီးတွင် ဗကသ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦး အနေဖြင့် သမိုင်းဝင်ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့စည်းရေး အဆိုကို ရဲရဲရင့်ရင့် တင်ပြခဲ့သည်။ ကိုဗဟိန်းက ဖြူဖြူနုနုကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဘ၀မှ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး၌ ဖြူးချောင်း ဖျား ပဲ ခူး ရိုးမ တောထဲ တွင်ကာဘို င်ေ သနတ်လွယ်လျက်ဖက်ဆ စ်ဂျပန်ကို တော်လှန်ခဲ့သည်။ သူကလည်းဖြူဖြူသန့်သန့်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဘ၀မှ တရုပ်မြန်မာနယ်စပ် ပါချောင်ဒေသ၌ကျောင်းသားတပ် မ တော်မြောက် ပို င်း ၏ ဥက္က ဋ္ဌ အဖြစ် စ စ် အာဏာရှ င်တို့  ကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်ရန် ကြိုးစားခဲ့သူ..။ ကိုထွန်းအောင်ကျော်က စာပေလေ့လာမှုအခံ အားကောင်းသည်ကိုတော့ ကျနော်သိခဲ့သည်။ သို့ သော် သူ ဂီတ ၀ါသနာပါခဲ့မှန်း မသိ ခဲ့ ။ နော် ဆုံးကိုထိန်လ င်းရေးသောစာကိုဖ တ်ြ ပီးကိုထွန်းအောင်ကျော်သည် ခေတ်ပေါ် ဂီတအနုပညာကိုလည်း ဂီတသင်္ကေတနုတ်ဖြင့် စနစ်တကျ လေ့လာတတ်မြောက် တီးခတ်တတ်သူတဦးဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရပြီး ကိုဗဟိန်းနှင့် တော်တော်တူတဲ့သူဘဲဟု အတည်ပြုခဲ့ မိသည်။ ကိုဗဟိန်းကလည်း ဂီတ၀ါသနာထုံသူ မဟုတ်ပါလား။ ထို့ကြောင့်လည်း ကိုဗဟိန်းသည် ထိုစဉ်က ကိုဋ္ဌေးမြိုင် (ဆရာကြီးဒဂုံတာရာ) နှင့်အရင်းနှီးဆုံးသူ ဖြစ် ခဲ့ သ ည် ။ ဆရာတာရာက သူ့  ကို့  က ဗျာနှ င့် တင် စား၍ ရုပ်ပုံ လွှာ ဖွဲ့ ခဲ့ ဖူး သည် ။ အခုကိုထွန်းအောင်ကျော်ကလည်း ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဂီက ၀ါသနာပါသူ၊ သို့သော် သူ တို့  နှ စ်ဦးသေဆုံး ပုံချင်းတော့ ကွာခြားနေသည် ။ ကိုဗ ဟိ န်း ကနှ လုံးရောဂါဖြင့်မန္တလေးဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးကုသခံနေရင်း ဖဆပလ နှင့်ကွန်မြူနစ်ပါတီအကွဲ၌ စိတ်ထိခိုက်ပြီး ဆုံးပါးသွားခဲ့ရသည်။ ကိုဗဟိန်း၏ ဈာပနကို တူတံဇဉ် အလံအုပ်လျက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင် သွားရောက်ဂါရ၀ပြုခဲ့သည်။ သူကတော့တရုပ်ပြည်နယ်စပ်တောထဲမှာ သူလျှိုဟု မတရားစွပ်စွဲ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသည်။ ခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံခဲ့ရသည်။ သူသေဆုံးပုံ ကို မင်းကို နို င်အပါအ၀င် သူ့ရဲဘော် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ သိရှိနိုင်ခွင့်ပင်မရခဲ့ပါ။ ကို ဗဟိန်းက ရု ပ်ဖြောင့်ဖြောင့်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်၊ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးသမား၊ စာပေဂီတမြတ်နိုးသူ …၊ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကလည်း ရုပ်ချောချောကျောင်းသားခေါင်းဆောင်၊ တော်လှန်ရေးသမား၊ စာပေဂီတ မြတ်နိုးသူ …၊ ကျနော့်အတွေးစိတ်အာရုံထဲမှာ ကိုထွန်းအောင်ကျော် အသတ် မခံ ရမီ နောက် ဆုံးသီ ဆိုသွားခဲ့ သော ယု ဇနပင် နဲ့ ဖဲကြိုးဝါ သီ ချင်းလေးကိုမှ န်းဆ ခံစားကြည့်နေရင်း … တနေ့နေ့ တချိန်ချိန်၌ ရတနာ ဘုံ မ္မိ နယ်မြေ မန်းတက္ကသို လ်ကြီး၏ သမဂ္ဂမြက်ခင်းပြင်ရှေ့တွင် … ကျဆုံးသွားလေသူ ကိုထွန်းအောင်ကျော်၏ ပုံတူကြေးရုပ်သွန်းထုလျက် ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို ချစ်ခင်လေးစားကြသော ကျနော်တို့ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက်ကျောင်းသား ရဲဘော် အားလုံး ၏ နှ လုံးသားများကိုဖဲြ ကိုးဝါများသဖွ ယ်ချည်နှောင် ဂုဏ်ြ ပုကြရမည့်ေ န့ ကို ရောက်ရမည်မလွဲဟု ကျနော် ယုံကြည်နေမိပါသည်။
This entry was posted on January 17, 2012 at 6:09 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.